Wararkii ugu dambeeyay ee Itoobiya. – Shabakadda Amiirnuur
Maqaallo, Maxaa Cusub, Uncategorized
November 23, 2020 5:30 am by admin Views: 111
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya ayaa Ismaamulka Tigeega ee TPLF u qabtay in ay muddo 72 saacadood ah isugu soo dhiibaan Ciidamadiisa Duulaanka ku jooga dhulka Tigreega oo todobaadyadaan dagaalo khasaare badan sababay ka dhaceen.
taa micnaheedu waaxaa weeye ina y magaalada Caasimadda ah ee Makhalle ku soo wareejiyaan.
asigoo hadalkiisa sii wata Abiy Axmad wuxuu hoggaanka Tigraay uu u sheegay in la marayo “meel aan laga noqon karin”
maamulka Tigreega ee TPLF oo gacanta ku haya dhulka buuraleyda ayaa ku goodiyay in ay dagaalka sii wadayaan oo aanay marnaba isdhiibeyn.
Ugu yaraan boqolaal dad ah ayaa ku dhintay dagaalka ka socda gudaha Itoobiya Gaarana Gobalka Tigreega iyadoo Baracayaal afartan kun ku dhaw isu dhiibeen dalka Suudaan.
Xukuumadda Itoobiya oo dagaalkeeda Amxaaradu qayb weyn ka tahay waxay sheegtay in Tireega ay Magaalooyin waaweyn ka qabsadeen laakiin ayna ka go’an tahay in ay duulaan ku tagaan Magaalada Caasimadda ah ee Makhalla diyaarna ay u yihiin in ay duqeyso.
Tigreegu dhankooda waxay Tilamaamayaan in ay u diyaar garoobeen Iska caabinta Ciidamada Duulaanka ku soo qaaday oo ay sheegayaan ay ku soo gardaroodeen.
Hoggaamiyaha TPLF Debretsion Gebre-michael oo u warramay wakaaladda wararka ee Reuters wuxuu shaaciyay in ciidamada u daacadda TPLF ay diyaariyeen qorshe rogaal celis ah oo ay kaga adkaadaan ciidamada Abiy Axmad
“Hirar iyo Mowjado dagaal ayey nagu soo qaadeen balse waxtar ma leh”.
Xaaladda Itoobiaya aya mareysa Meel aad u xun waxaana la saadaalinayaa in dagaaladu sii xoogeystaaan.
Abiy Axmed ayaa dhegaha ka daarsaday baaqyo shisheeye kala duwanu soo jeediyeen oo la xariiray in dagaalka la joogiyo lana wada hadlo.
Tigreegu waxay diyaar u yihiin dagaal natiijayadiisu noqotoa ama iin ay Itoobiya dib u qabsadaan ama ay Dalka intiisa kala uga go’aan.
Waxaa laga baqayaa in qowmiyado kale ku dhawaan dhawaaqaan go’aano Dowladda federaalka Itoobiya ka dhan ah taasuna ay keento in itoobiya kala fur furfarato ama sidaasi ku dunto.